Inona no itovian’ny fanjonoana krila sy ny fitrandrahana ny hazo santal? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jolay 2018 11:21 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, English
Araka ny fijerena azy voalohany, tsy misy itoviany ny krila sy ny hazo santal : ny iray biby an-dranomasina ary ny iray zavamaniry an-tanety. Raha maka fotoana tsara mandinika ny toe-javatra mafy iainan'ireo karazany roa ao anatin'ny karazana zavamananaina ireo, hahita fa misy ihany ny itoviany.
Hazavain'ny profesora Richard Leakey [amin'ny teny anglisy] ao amin'ny blaoginy, taorian'ny fodiany avy tamina iraka tany amin'ny Tendron-tany Atsimo [amin'ny teny anglisy], fa nametraka fomba tena mahomby ahafahana manjono ny krila ilay ekolojista kenyana fantatra maneran-tany. Manome antoka ny hanaovana jono tsara ho an'ireo sambo afaka mitondra lanja aman-taoniny amin'ity hazandrano bitika kely ity izany, izay ny vokany voalohany dia ny fihenana malakin'ireo loharanon-karena. Manana toerana fototra amin'ny fototsakafon'ny ankamaroan'ny biby an-dranomasina manana hazon-damosina ny krila.
Sorona amina fitrandrahana diso tafahotra loatra ihany koa ny hazo santal, toy ny asehon'ny ohatra kenyana nosafidian'ny blaogy Saving Kenya's Forests blog (Mamonjy ireo ala ao Kenya) [amin'ny teny anglisy]. Afaka vakiana ao amin'ny blaogy ny hoe :